Mapurazi Mhuka Puzzle, Yemahara kune Yakatemwa Nguva | IPhone nhau
Kwasara mazuva mashoma kuti zororo reKisimusi ritange uye mukati memwedzi uno tanga tichikuratidza zvakasiyana mafomu nemitambo kuitira kuti vadiki vari mumba vagowana nguva yekunakidzwa pavanenge vachidzidza (uye nenzira yavanotisiya takanyarara. ). Ino nguva tinotaura nezve mutambo wepuzzle umo tinogona kusiyanisa kuoma, zvekuti hazvisi nyore kana kuomarara kuagadzirisa. Chipfuwo chemhuka diki chinotarisana nezviitiko zvinowanzoitwa mupurazi, zviitiko zvinovezwa muchimiro chemapuzzle kuitira kuti mudiki kusvika pamakore mashanu ekuzvarwa, dzidze mabasa anoitwa mazviri.
Pakati pemaonero akasiyana emapuzzle Zvatichawana muFarm Animals Puzzle tinowana iyo yekuunganidza michero, kuvesa moto, kutsvaga pfuma yakarasika, kukohwa miriwo mubindu, kuongorora mudura nekuteurwa, hove mudziva, kubatsira mhuka kuyambuka zambuko, kunhonga maapuro kubva mubindu remichero, uchibhururuka mundege yekupfapfaidza kana kutamba pamba nambuya.
Zvimiro zveFarm Animal Puzzle
Puzzles emazera ese, matinogona kugadzirisa nhamba yezvidimbu.
Mhuka dziri mumapuzzle dzinouya kuupenyu kana pikicha yagadziriswa.
Iyo yehupenyu inosiyana nguva imwe neimwe painodzokororwa.
Mumhanzi unobata kwazvo uye manzwi.
Ichi chishandiso chakanangidzirwa kukireshi, kuenda kukireshi uye vana vepuraimari vana, kwavanotanga kutanga hunyanzvi hwekugadzirisa matambudziko ari nyore. Farm Animal Puzzle inoda iOS 6.0 kana kuti gare gare, inoenderana neyeKugovana Kwemhuri basa uye inogona kunakidzwa pane iyo iPhone, iPad uye iPod touch. Uyu mutambo unongotora zvishoma zvishoma pasi pe70 MB pane yedu kifaa uye Izvo zvinongova muChirungu chete, asi mamenyu acho anonzwisisika uye haadi kushandurwa kana iwe usina ruzivo rwemutauro uyu..
Mapurazi Mhuka Puzzles Yevana4,49 €
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Mapurazi emhuka mapuzzle, emahara kwenguva shoma
Facebook Messenger inotangisa mafoni evhidhiyo
Minecraft inouya kuApple TV yakadhurirwa mutengo wezve media media